သံအဆုံးအဖြတ်များအတွက်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ - PROGRAM တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း - 2019
bootable flash drive ကိုနီးပါးမည်သည့်အသုံးပြုသူမှအသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ discs တွေကိုများ၏ရိုးရာအသုံးပြုမှုနေသော်လည်း, တစ်ဦးကို USB drive ကနေ operating system ကို install လုပ်အားသာချက်များစွာရှိပါသည်။ ပထမဦးစွာပုံရိပ်ကို prefabricated နှင့်ပုံမှန် disc ကို fit နိုင်သည်ထက်အများကြီးပိုချိန်တွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တစ်ဦးသည်သမားရိုးကျ drive ကိုနှင့်အတူထက် သာ. ကြီးမြတ်ပြင်းအားအတော်ကြာအမိန့်တစ်ခုကို USB drive ကနေ install လုပ်သည့်အခါဖိုင်များကိုကူးယူ၏အမြန်နှုန်း။ နောက်ဆုံး - ကွက်လပ်များသောအားဖြင့်တစ်ခါသုံးများမှာနေစဉ် flash drive ကိုပေါ်, သငျသညျ, များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကို USB drive ကနေ operating system ကို installation ကို netbook များနှင့် ultrabooks ၏အသုံးပြုသူများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါသည် - အဲဒီမှာ disk ကို drive ကိုမကြာခဏမရရှိနိုင်။
မေးခွန်းတစ်ခုမေးရန်ကွန်ယက်၏ကျယ်ပြန့်မှာတော့အသုံးပြုသူတစ်ဦးကြီးမားသော kolichetsvo မဆိုအထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းရည်၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့တွင်စာသားဒဏ္ဍာရီထုတ်ကုန်ထွက်ရပ် - WinToFlash။ ကအရှည်ဆုံးသမိုင်းမဟုတ်ပါသော်လည်း, ပရိုဂရမ်ကိုချက်ချင်းက၎င်း၏ရိုးရှင်းများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအဘို့များစွာသောပရိတ်သတ်တွေအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးသည်ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် Windows7နဲ့ bootable USB drive ကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ထို program ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည်တဲ့ဆင်သင့်-disk ကိုပုံရိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မှတျတမျးတငျထားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွက်လပ်အဖြစ်တစ်ဦးအချည်းနှီးသော flash drive ကိုသင့်လျော်သည့်ကွန်တိန်နာဆိုလို။
1. စတင်ခဲ့ပြီးရဖို့, သင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၏တရားဝင် site မှပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ က "အာဆင်နယ်အသင်းဟာ" တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဆိုလိုသောအစီအစဉ်၏အတော်ကြာ edition မှာ, ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအရမ်းပထမဦးဆုံး Lite ကို Edition ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည် - ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, အများကြီးအာကာသကိုတက်ယူမထားဘူးနှင့်ပုံမှန် bootable USB drive ကိုအားလုံးလိုအပ်သော features တွေရှိပါတယ်ဖန်တီးရန်။
ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးတည်ငြိမ် download ပြုလုပ်သံလိုက်-link ကိုတဆင့်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါရန်အကြံပြုသည်။
2. ဒါဟာအိတ်ဆောင်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည် - မတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်စနစ်မလိုချင်တဲ့ခြေရာတွေကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲ, ဖိုင်တွဲတစ်ခုကနေတိုက်ရိုက် run ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်တစ်ခရီးဆောင် mode မှာပရိုဂရမ်နဲ့အလုပ်လုပ်လေ့ရှိသောသူတို့သည်အသုံးပြုသူများအတွက်စံပြ။
3. ဖိုင်ကို loaded ပြီးတာနဲ့ - အစီအစဉ်ကို (အိတ်ဆောင်ဗားရှင်းအဘို့ - ရုံမှန်ကန်သော directory ကိုမှဖိုင်ကိုဇီပ်) installed ရမည်ဖြစ်သည်။
4. ချက်ချင်းပစ်လွှတ်ပြပွဲပြီးနောက်အဆိုပါအစီအစဉ် Quick Start Wizard ကို။ ဒီ window ထဲတွင်သင်အစီအစဉ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. အကျဉ်းချုံးကိုဖတ်လို့ရပါတယ်။ လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်သင် (ကလည်း "ငါသည်စာရင်းဇယားပေးပို့ဖို့သဘောတူ" uncheck ရန်အကြံပြုသည်) ကိုလိုင်စင်ပေးဖို့သဘောတူဖို့လိုတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပိုဒ်သခင်ခုနှစ်တွင် Non-စီးပွားဖြစ်အိမ်မှာအသုံးပြုမှုများအတွက်အခမဲ့ဗားရှင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့ပြင်တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းသတိထားရပါလိမ့်မယ် - သငျ uncheck ဖို့လိုတယ်, အဘရောက်ဇာကိုပင်မစာမျက်နှာနေရာမှာအစားထိုးမှအဆိုတင်သွင်းရာ။
5. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုနှစ်ခုသည် Modes အတွက်အလုပ်လုပ်တယ် - သခင် နှင့် တိုးချဲ့။ ပထမဦးဆုံး - အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်ပိုပြီးရိုးရှင်းချဉ်းကပ်ယေဘုယျအသုံးပြုသူများသည်။ စတင်ရန်ကထင်ရှားတဲ့အစိမ်းရောင်အမှန်ခြစ်အမှတ်အသားပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
5. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုနှစ်ခုသတင်းရင်းမြစ်ထံမှ bootable USB flash drive ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည် - သင့် hard disk ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားဒါမှမဟုတ် disc ကို Drive ထဲကိုထည့်ထားသော operating system ကိုပုံရိပ်ကနေ။ ဒုတိယနည်းလမ်းအကြာတွင်မီးလောင်ရာများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ဖိုင်ဖို့အလယ်အလတ် disc ကိုမိတ္တူရှင်းလင်းစေပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေး၏တပ်မက်လိုချင်သောနည်းလမ်းနှစ်ခု switches များ setting များ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မရွေးသည်။
5. image ကိုသက်ဆိုင်ရာ menu ကိုကို item ကိုအောက်ပါစံမှတဆင့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လျှင် ဉီးစီး ဒါဟာသူ့ကိုရန်လမ်းညွှန်ပြ။ သင် drive ကိုမှလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ရန်၎င်း၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ billet အထိလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လျှင်။ ရုံဤ box ကိုအောက်တွင်အသံဖမ်းများအတွက်ကို flash menu ကဖြစ်ပါသည် - ကလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ် - တဦးတည်းကွန်ပျူတာသို့ထည့်သွင်းလျှင်အနည်းငယ်လျှင်, program ကိုအလိုအလျှောက်ပါကနှင့် display ကိုစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်။
အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များမပါဘဲနှင့်မကောင်းတဲ့လုပ်ကွက်မပါဘဲတစ်ဦးကို USB flash drive ကိုသုံးပါ။ ဒါဟာပေါ်မှာရှိသမျှဒေတာတစ်ခု operating system ကို image ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။
5. အောက်ပါပစ္စည်းများအတွက်စာရင်းအပေါငျးတို့သ parameters တွေကို Windows အခွင့်လိုင်စင်ကိုလက်ခံပြီးတော့တစ်ဦး flash drive ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ image ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုစတင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့။ အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်မြန်နှုန်းသိုလှောင် parameters တွေကိုနှင့်ပုံရိပ်ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
6. မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်, output ကို bootable flash drive ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့လုံးဝအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
7. တိုးချဲ့ စစ်ဆင်ရေးဖိုင်ကိုစံချိန်သူ့ဟာသူဒဏ်ငွေ-စာကပါဝင်ပတ်သက်သည့်ကြိုတင်အဆင့်ကိုချက်ချင်းကပ်။ ဒါခေါ်ဖန်တီး setting များကိုစဉ်အတွင်း လုပ်ငန်း - အကြိမ်ပေါင်းများစွာမှတ်တမ်းတင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်အသုံးပြုသူ-တိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်ဘောင်, အစုတခု။
Advanced mode ကိုပိုမိုအဆင့်မြင့်နဲ့ Windows ရွှေ့ပြောင်း, WinPE, DOS ကို, boot loader နှင့်အခြားဒေတာမှအသုံးပြုသူများကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
8. အဆိုပါ Advanced mode ကိုအတွက် Windows7ကို operating system ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်, သငျသညျအောကျပါအ parameters တွေကို configure ဖို့လိုအပ်:
- tab ကို အဓိက parameters တွေကို တစ်ဦးကို flash card ကိုမှလမ်းကြောင်းနှင့်အတူပြုမူလည်းအထက်ပါနည်းလမ်းနဲ့ဆင်တူဖိုင်သို့မဟုတ် drive ကိုလမ်းကြောင်းညွှန်ပြနှင့်။
- tab ကို ပြင်ဆင်မှုအဆင့်ဆင့် တစ်ဦးစံ mode ကိုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ကြောင်း sequence ကိုအဆင့်ကပြောပါတယ် မာစတာ။ ပုံရဲ့သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်အမြင်လျှင်, အသေးစိတ်မဆိုခြေလှမ်းလက်လွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ရိုးရှင်းစွာသင့်လျော်ကို tick ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအခမဲ့ဗားရှင်းအနေနဲ့ပုံရိပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်အမှားများကိုများအတွက် disk ကိုစစ်ဆေးမရရှိနိုင်, ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ပစ္စည်းကိုချက်ချင်းပိတ်နိုင်ပါသည်။
- အဆိုပါ tabs များအတွက်ရွေးချယ်စရာ format နဲ့ Layout နှင့် ပိုပြီး Layout ပုံစံချပေးနှင့်ပိုင်ခြားအစီအစဉ်အမျိုးအစားဖော်ပြသည်။ ဒါဟာလိုအပ်သောလျှင်ရက်စွဲများ default settings ကိုစွန့်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြံပြုသည်။
- inset disk ကို Check ဒါဟာသင်အမှားအယွင်းများအဘို့အဖြုတ်မီဒီယာ scan ဖတ်ဘို့ settings တွေကို configure နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မှတ်ဉာဏ်မှမှတ်တမ်းတင်ဖို့သူတို့ကို fix ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
- tab ကို loader ကို သငျသညျ Bootloader ကိုနှင့် UEFI မူဝါဒ၏အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ WinToFlash အစီအစဉ်၏အခမဲ့ဗားရှင်းကိုမရရှိနိုင်ဟာ GRUB boot loader ဖြစ်ပါတယ်။
9. ပြီးတာနဲ့အားလုံး parameters တွေကိုအသေးစိတ်မှာ set up နေကြတယ်, ပရိုဂရမ်ကိုတစ်ဦးက USB flash drive ကိုတစ်ဦးက Windows image ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းစတင်သည်။ အဆိုပါ flash drive ကို၏အလုပျ၏အစီအစဉ်၏အောင်မြင်သောပြီးစီးပြီးနောက်ချက်ချင်း operating system ကို install လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
လွယ်ကူခြင်းအစီအစဉ်ကိုဒေါင်းလုဒ်နှင့်အတူစတင်ပြီးသားသိသာသည်။ ရိုးရှင်းပြီး Russified Menu ထဲမှာ set အစာရှောင်တင်, fixed နှင့်အိတ်ဆောင်ဗားရှင်း၏အသုံးပြုမှု, အသေးစိတ်နှင့် functional setting ကို, - ဤကမဆိုရှုပ်ထွေး၏ operating system ကိုအတူ bootable flash drive ကိုဖန်တီးနေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောပရိုဂရမ်တစ်ခုက WinToFlash ၏အားသာချက်များရှိပါသည်။